देश बचाउने भए राष्ट्रघाती अपराधिहरुका विरुद्धमा आगो ओकल्नु पर्ने परिस्थिति हो यतिबेला ! «
देश बचाउने भए राष्ट्रघाती अपराधिहरुका विरुद्धमा आगो ओकल्नु पर्ने परिस्थिति हो यतिबेला !
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार २३:५१
नेपाली मनोबिज्ञान दबाउने साम्राज्यवादी शिष्टाचार -नेपाल कंगाल बनाउने लुटेराहरुको जयकार गर्नुहोस् र आफू उँट चराउन साउदी अरबतिर लाग्नुहोस् ! विदेशी योजनामा नेपालीहरुको रगत पिने आततायि शिकारीहरुलाई धुपबत्ति बाल्नुहोस् र आफूले १७ हजार कंकालका हड्डी हेरेर हाँस्नुहोस् ! वाईडबडी, निर्मला र बालुवाटारका धार्मिक कथा सुन्नुहोस् र कथाका रचनाकारहरुलाई कोटीकोटी प्रणाम गर्नुहोस् ! आफूले घरघडेरी बेचेर मलेसिया लाग्नुहोस् र उतैबाट अरबपति हात्तिछाप चप्पलेहरुको संघीयतावादको रसस्वादन गर्नुहोस् ! पराइले आमामाथि बलात्कार गर्दा थपडी बजाउने पराई मानसपुत्रहरुलाई जिन्दावाद भन्नुहोस् र मातृत्वभन्दा मालिकभक्ति श्रेष्ठ भएको उदाहरण देखाउनुहोस् !
साम्राज्यवादले लेखनदासहरु प्रयोग गरेर नेपालीहरुको मनोविज्ञानलाई दबाउन शिष्टाचार सिकाउन थालेको छ। अपराधवृत्तिमा परिणत भएको यथास्थितिका विरुद्धमा नबोल्न उपदेश सुनाउन थालेको छ। दलालहरुकोे आयू लम्ब्याउन साम्राज्यवादले प्रयोग गर्न थालेको शिष्टाचारको डण्डा नेपालीहरुको मष्तिष्कलाई निष्कृय बनाएर नेपाल मास्न तयार पारिएको डिजाईनको यौटा अंग हो। यसले भन्छ- नियमकानून सत्तामा बस्नेहरुका लागि होईन, सर्वसाधारणका लागि हो। यसले भन्छ- नैतिकता शासकहरुका लागि होईन, शासितहरुलाई मात्र हो। यसले भन्छ- शक्ति हुनेहरुका सबै अपराधहरु क्षम्य छन्। जो शक्तिहिन छ, त्यसको असन्तुष्टि सर्वथा अक्षम्य छ।
यो खरतानाक हतियार हो। यसले नेपालीहरुको चिन्तन प्रकृयालाई निष्कृय बनाउन खोजेको छ। यसले मानसिकतामा सून्यता खडा गर्न खोजेको छ। यसले नेपालीलाई भाग्यवादमा डुबाएर अपराधको साम्राज्य खडा गर्न खोजेको छ। नैतिकता, न्याय र कर्तव्यलाई एकपक्षिय रुपमा ब्याख्या गर्ने यो कुप्रवृति चरम प्रतिकृयावादी प्रवृति हो। प्रतिकृयावाद चरम रूपकाे स्वेच्छाचारीताको अवस्थामा रहेको यो समयमा हामीले बुझ्ने कुरा हो- अराजकतावादलाई अराजक कार्वाहीबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ। जसले आक्रमणकारीको प्रतिकार गर्दैन, त्यो मारिन्छ। अपराधिहरुका विरुद्धमा आगो ओकल्नु पर्ने परिस्थिति हो यतिबेला। दुर्गन्धलाई जलाउन आगो नै बाल्नु पर्दछ।
अपराध र कुशासनका विरुद्धमा नकारात्मकपन बढ्नु सकारात्मक सोंच हो – नेपालीहरुमा अराजकता, अशिष्टता, नकारात्मकता, मानमर्दन, गालिगलौजका प्रवृतिहरु बढेर गएका छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने मानिसहरुको आलोचना गर्ने “सभ्य” विद्वानहरुका मिठा अर्तिहरु सुनिन थालेका छन्। यस्ता नकारात्मक भाषाहरु लेखिनु हुँदैन भन्ने कुरा तिनीहरुले पढाईरहनु पर्ने कोर्ष होईन।
नकारात्मक सोंचको श्रोत के हो ? संसारमैं सहिष्णु मानिएको नेपाली जाति किन नकारात्मक बन्दै गएको छ ? रातको समयमा घरमा आएको बटुवालाई आफू भोकै बसेर भए पनि आतिथ्य दिने नेपाली संस्कृति के कारणले मन नपर्नेहरुको मानमर्दन, अभद्र व्यवहार र रूखाेपनका रुपमा परिणत हुँदै गएको छ ?
यसको जबाफ ६० लाख नेपाली देश निकाला गरेर रातारात अरबपति बन्ने अपराधिहरुको जीवनमा खोज ! यसको जबाफ जनताको कर मोजमस्तिमा उडाएर भ्रष्ट ऐय्यासि जीवन बिताउने कुलिनहरुको जीवनमा खोज ! यसको जबाफ देश डुबाएर कुर्सिका लागि विदेशीको चौकिदारी गर्ने दलाल चरित्रमा खोज !
एउटा लम्पट आवारालाई गरिने सम्मानको भाषा कस्तो हुन्छ ? अर्काको खुनपसिना चोरी गर्ने चोरलाई कुन शैलिमा सम्मान गरिन्छ ? पराईको जुठोपुरो चाट्नका लागि जन्म दिने आमाको अस्मिता बेच्ने गद्दारलाई सम्मानजनक रुपमा गरिने प्रणाम कस्तो हुन्छ ? जागिरे उपदेशकहरुले यी प्रश्नबारे कहिल्यै सोंचे ?
नेपालीहरुमा बढ्दो नकारात्मक भावलाई व्यक्तिगत दोषका रुपमा देखाएर विद्वान भै टोपल्न खोज्नेहरु घ्यू खाने मौका ढुकेर बसेका अवसरवादीहरु हुन्। प्रत्येक मानिसको सामाजिक चेतना उसको परिवेशको उपज हुन्छ। परिवेश जस्तो छ, मानिसको सोंच त्यस्तै बन्दै जान्छ। यो प्रतिकृयात्मक उत्पत्ति हो।
घोर नकारात्मक प्रवृति विद्रोहको पूर्व संकेत हो। काण्डैकाण्डका अपराधका चाङ र कुशासनका विरुद्धमा नकारात्मकपन बढ्नु सकारात्मक सोंचको दिशा हो। हर प्रकारका शासकिय कुप्रवृतिहरुप्रति मौन रहने वा नबोल्ने प्रवृतिले नै नेपालीहरुले धोखा पाएका हुन्। अपराधिहरुप्रतिको सहिष्णुता र उदारताले नेपाल यस्तो भएको होईन ?
पारवाहन संझौता र BRI को आतंकका कारणले, ईण्डाे-पश्चिमा दलालहरूकाे समिकरणकाे प्रयास- चीनसंगको पारवाहन संझौताको अन्तिम टुंगो लाग्नु र नेपाल-चीन रेल कनेक्टीभिटीको योजना बिआरआईमा समेटिनुका घटनाहरुले ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी वृत्तमा आतंक फैलाउन थालेका छन्। पहिलो कुराले नेपालमा पटकपटक नाकाबन्दि लगाएर वार्गेनिङ गर्ने ईण्डियन हतियार भाँचिन पुगेको छ भने दोश्रो संझौताले नेपाललाई बिआरआईबाट अलग्याएर ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने ईण्डो-पश्चिमा योजनामा तुषारापात भएको छ।
०५२ सालदेखि एकातिर संसदवादी र अर्कोतिर माओवादी बुख्याँचाहरु खडा गरेर १७ हजार नेपालीहरुको हत्या गराएका साम्राज्यवादीहरुले अहिले त्यस्तै रणनीति अख्तियार गर्न थालेको देखिन्छ। ओली-दाहालको सरकारबाट पनि खुरुखुरु काम गराउने र सडक पक्षको आवरण ओढाएर अर्काथरी दलाल तथा एजेन्टहरुको शक्ति केन्द्रित दुई पक्षलाई लडाउने रणनीतिको अङ्गका रुपमा उपेन्द्र-बाबुराम र राजपाको नाटकिय एकताको प्रकृया सतहमा आएको छ।
होलि वाईन सम्मेलनदेखि यूरो..अमेरीकन खेमा (ईण्डियाको रअ समेत सम्मिलित) ले आफ्नै पकेटको शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेको छ भने विजेपीले पनि त्यस्तै गर्न खोजिरहेको छ। तर चीनको विरोध र नागरीकता लगायत केही मुद्दाहरुमा सबै थरी साम्राज्यवादीहरुको रणनीति मिल्न गएको हुनाले एकातिर उपेन्द्र-बाबुराम-राजपाको एकताको संभावना खोज्न थालिएको छ भने अर्कोतिर यीनीहरुमध्ये एउटा पक्ष आफूमाथि हावी नहोस् भनेर सतर्क पनि भैरहेका छन्।
उपेन्द्र र बाबुरामका बिचमा एकताका लागि टुंगिन लागेको भनिएको वार्ता प्रकृयामा आकस्मिक रुपमा राजपालाई बोलाईनुले ‘माथिको आदेश’लाई संकेत गर्दछ भने वार्तामा राजपा प्रवेश गरेर एकताभन्दा अगाडि मोर्चा बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नुले पश्चिमा र विजेपीका बिचमा अविश्वास पनि रहेको देखाउँछ। सबै वार्तामा बस्नु पर्ने बाध्यताको कारण चीन विरोध हो भने एकता कि मोर्चा भन्ने विवाद अर्को पक्षमाथि आफू प्रभावशालि बन्नका लागि चालिएको खेल हो।
,दाहालको फेसबुकबाट , उल्लेखित विषय लेखकका निजी विचार हुन् ।